Ibhinqa elinamandla, umntu obuthathaka
Kukholelwa ukuba iingcamango zokuthi "ubuthathaka" kunye "nobuqili" beza kunye namadoda ukuze baqinisekise ukuphakama kwabo kwabasetyhini.
Kulo lonwabo uluntu jikelele, imbambano yokulingana ngokwesondo iyanqunywa yiokhokho. Kwaye ngoku, ukuba uziva ungakhululekile kwimigqomo yowesifazane wesibini, ungakhetha loo mzekelo wokuziphatha oza kulungelelanisa umlingiswa wakho - oku kukhetha kwakho, uluntu lwanamhlanje alukhathaleli. Kodwa xa umbhali waseFransi uGeorges Sand wayegqoke isambatho samadoda, kwakubonakala ngathi ngumngeni onzima kwaye uphukisa!
Inkulungwane ye-XX yagqithisa abafazi ngaphantsi kwesibhengezo sokukhululwa. Emva koko, iminyaka engama-150 eyadlulayo, ithuba lokuzizaliseka ngokwabo lenziwa kuphela kumtshato ophumelelayo kunye nokuvelisa inzala. Ngoku oku kukhwankqisayo ukucinga. Emva kwakho konke, abantu bethu baziva bephila kwihlabathi eliye lalingabantu kuphela, likhululekile. Sinazo zonke iindlela zokuqhuba imoto, indiza, ibhanki, ilizwe. Kuya kuba nomnqweno. Ngako oko, imfazwe ende yokulingana kwezesondo ingaqwalaselwa njengeyinqanaba. Amadoda avela kwimikhosi yokugqibela ezama ukugcina ukufaneleka kweengcali zengqungquthela "ebuthathaka" kwaye "eqinile". Kulo mfazi wesimanje ungaphenduli ngelizwi, kodwa ngezenzo.
Okumangalisayo kukuba, bekubakho ukuthatha inxaxheba kwabasetyhini kwimigqomo yobungcali bebhokisi eyaba ngenye yeengongoma ezibukhali zengxabano zesondo. Amadoda angenabuhlungu ayamkela abafazi kuwo onke amanqanaba entlalontle kunye nezopolitiko. Kodwa xa kufike ebhokisini, nanko "isondo esomeleleyo" saqala, iingxoxo zaqala malunga nenyaniso yokuba ibhinqa lilahlekelwa ngokwesini, liba yinto engcolileyo, ingabonakaliyo kwaye ingathandeki kwisifiso sayo sokuba njengomntu kwaye, ngokubaluleke kakhulu, umzimba womfazi awufanelekile ukuhamba. Kwamazwe amaninzi ehlabathini, ukulwa kwamabhinqa kwaye kwavalwa. Kodwa ukuvinjelwa kwesi siqwenga esasimangalisayo esasisigxina kwintsimi yesilisa saqhubeka. Ngokubanzi, abafazi babengenakuvinjelwa ngabasetyhini, kodwa abazange bavunyelwe kwimidlalo yezobugcisa. Kuze kube kutshanje, ibhoksi yodwa imidlalo apho abafazi babengaboniswa kwimidlalo yeOlimpiki.
Kwaye kuphela kulo nyaka iKomiti yeOlimpiki yamazwe ngamazwe inqume ukubandakanya ibhokhwe yabesifazane kwi-Olimpiki yase-2012 eLondon. Le imfazwe ilungelo lokuthatha inxaxheba kwi-Olimpiki yahlala iminyaka engaphezu kwekhulu. Ngeli xesha, ngenxa yezifundo ezininzi, umba wokungahambelani nomzimba wesifazane kule midlalo sele usususwe ixesha elide - amadoda namabhinqa anomngcipheko ofanayo wokulimala.
Ngokuqinisekileyo, kwilizwe lethu umzabalazo wabasetyhini kunye neziseko zobukhosi akuzange kube nzima njengamazwe aseNtshona. Kwaye, kodwa ke, abafazi abasebenzisa imidlalo enxulumene nobudlova kunye nomkhosi bahlala bejamelana nokungaqondi kakuhle kuluntu.
Kuhle ukuba iphelile kakuhle, kodwa, ngelanga, akusoloko iqhubeka. Ngoko, umzekelo, u-Masha K. (iminyaka engama-30), umdlalo wokukhangela ibhola wokuqhafaza wagqiba ekuhlukaneni nentsha. "Sadibana noSerezha kwiholide zasehlobo eenkampini zabafundi. Sasininzi ngokufanayo, siphulaphule umculo ofanayo, sasithanda iifilimu ezifanayo. Ukongeza, kwavela ukuba sivela kwidolophu enye. Xa bebuya kwinkampu, baqala ukudibana. Ubomi buhamba ngendlela yazo: isiko, indlu, icandelo lezemidlalo. Ndandiqeqesha kathathu ngeveki, kodwa uSergei wayebonakala eninzi. Wayefuna ukuba ndichithe ixesha elithile ekhaya, ndibubula ngephandle kwiwindow ngokulindela intanda yakhe. Ekuqaleni wahlala ethule, kodwa ngokukhawuleza waqala ukuphawula oko, bathi, kuya kuba kuhle ukuyeka kunye nemidlalo. Ngoko kungabonakali ukuba kufikelelwe kwisigxina: mhlawumbi mna, okanye ibhola yebhokisi. Nangona ndiyamthanda uSergei, ndayazi ukuba ukuba ndimrhweba ngoku, bekuza kuphila ubomi. Andiyi kuvuma indima yexhoba, kwaye ndakhetha umdlalo. Amanxeba aphilileyo aphilise, kwaye ndatshata nomntu owamkela mna njengam. "
Inzululwazi yanamhlanje iye yabonisa ukuba: ukukhawuleza kwexesha elide le-adrenaline kukuthintela impi enkulu yempi. AmaSpain asebenzayo aqonda oku kudala kwinqanaba le-intuition. Isithethe seSpanish nesiPhuthukezi sihlaselwa ngonyaka emva konyaka ngokuthi "ukuluhlaza", i-pacifists, abantu kunye nabanye ababambe iqhaza lokuhlalisana ngokuthula komntu kunye nendalo. Kodwa abemi abashisayo nabakhakisayo bePeninsula yase-Iberia, naphezu kwayo yonke into, baxabise kwaye baxabise izithethe zabo. Akunakwenzeka ukuba uwabeke ngcikivo, kuba unyaka ngamnye amawaka namawaka emilutha e-adrenaline ayilwa eSpain evela kuwo wonke umhlaba. Kuyaphawuleka ukuba olu lonwabo luye lwafumaneka ixesha elide kwizondo zombini. Ukuvalwa kweentlobo zeentombi zabesifazane zenziwa kuphela kwi-XX leminyaka. Nangona kunjalo ukuba namhlanje akukho mingcipheko ekhethekileyo ekuthatheni inxaxheba kwabasetyhini kwi-bullfighting, ababaninzi abaninzi abafazi. Ngeengxabano zokuthi i-corrida iyimpahla yegazi yamandulo, kunzima ukungavumelani. Kodwa, njengokuba uyazi, indondo nganye inamacala amabini. Nantsi indlela umfazi welizwe lethu u-Olga M echaza ngayo ukubonakala kwakhe: "Umyeni wam wandibhudulela kwikorori ngexesha lethu holide ePortugal. Ekuqaleni ndandingathembeki ngembonakalo - andithandi inkohlakalo nangaliphi na uhlobo. Kodwa konke ukubandlulula kwandipha xa ndibona ukuba i-matador yayingumfazi. Ndacinga ukuba ukuba akayikwesaba ukuba khona, kwibala lezemidlalo, enye ngenye inkunzi yenkomo, ngoko ndilapha, kwisiqendu, akukho nto yoyikayo. Wayenomdla! Kwaye, ngokunyanisekileyo, emva kokubonileyo, ndazibhokoxa kakhulu. Kwaye ngoku, ngexesha lobuthathaka, xa kubonakala ngathi "andinako," "Ndidiniwe," "Ndibuthathaka," Ndihlala ndikhumbula loo ntokazi e-Arena, kwaye ndiyadana ngokuziphatha kwam. "
I-popularizer edumileyo kwiinkcukacha zehlabathi yayingu-Ernest Hemingway. Kwaye intombi yakhe eqhelekileyo uConchita Cintron yayingumfazi wesifazane. Ngelishwa, wayengenakuyidlulisa umkhosi wendabuko wokuqalisa, ekubeni umbuso waseFranco ngokubanzi wawunqande abesifazane ukuba bathathe inxaxheba kwinkomo ye-bullfight.
Ukunyamekela ukunyusa amandla, okanye, ngokulula, ukuphakanyiswa kwezemidlalo kwezilingo, kunomfazi waseMukraine okhuselekileyo wemvelo. Kwaye, nangona kunjalo, ndandibonile ngokuphindaphindiweyo indlela ukubukeka kwowesifazane ophethe ibha kubangela ukuphendula okumangalisa ngayo "isondo esinamandla". Kuyamangalisa ukuba ukubukeka kwebhinqa ethwele iibhegi ezimbini ezinzima kunye nokutya kweveki nganye kuthathwa ngokungenanto. Nangona ukuhlekwa, okanye kunoko, ngokuchasene nabo, inani labafazi kwiimpahla zonyuka liye landa kule minyaka eyi-10 edluleyo. Ayikho indima yokugqibela ekuqhutyweni kwamandla ebhinqa edlalwa ngamagosa amaninzi okhuphiswano olubanzi lwamazwe aseVictoria Posmitnaya. Unjineli-geophysicist ngemfundo, unina wabantwana ababini kunye nomfazi omhle, kunye nomzekelo wakhe uVictoria ubonise indlela onokuba ngumfazi kunye nezemidlalo ngexesha elifanayo. Nguye kuphela umfazi wase-Ukraine owabambe iqhaza kulo mqhudelwano "I Hero of the Year" ngokubambisana namadoda, eyenza imbali njengowesifazane onamandla kunazo zonke e-Ukraine, ukufumana amaninzi kuwo. Ngombulelo wakhe, uPotmitnaya akazange abe ngumdlali owaziwayo nje kuphela, kodwa kunye neenkwenkwezi zamaphephancwadi acwecwezelayo, evula indlela yokufashisa uhlobo olutsha lobunqunu- oluqinileyo, olunamandla, oluzinzileyo kunye oluzimeleyo.
Akuyena wonke umntu owaziyo, kodwa indawo yendawo ekuthiwa yindoda yokulwa ne-Amazons iyabonwa ngokuba yiNxweme loLwandle oluMnyama, oko kukuthi, ngokuyinxalenye yommandla we-Ukraine namhlanje. Ininzi yobomi be-Amazons yayiqhutywe ngehashe. Umsebenzi wabo oyintloko yimfazwe. Kukho umlando wokuthi nakwiimfazwe zentombi ezincinci zatshisa amabele abo afanelekileyo ukwenzela ukuba kube lula ukunqumla umgca.
AmaAmazons awazange azibekezele. Ukuvelisa inzala, bebanxibelelana namadoda avela kwizizwe ezakhelene nabo. Ukuba inkwenkwe yazalwa, yashiywa kuyise. Amantombazana athathwe kunye nawo kwaye aqeqeshwa kwimicimbi yempi.
Ubume bomlomo kunye nendalo
Imigaqo yentlekelelo yabasetyhini
Inzuzo engenakuphikiswa yesikhalala
Ukuhlwaya, okukhawuleza, okungaqhelekanga:
Isobho sePuree kunye namazambane ahlambulukileyo
Imithetho Eyisiseko Yokondla Ohlukileyo
Yintoni ekufuneka ibhinqa eliyintandokazi libukeke ngayo?
Ukukhulelwa komntwana - ukungafuni komntu ukukhula
Indlebe evela kwi-salmon
I-cheekbones yePlastiki: iindidi, intsingiselo yokuhlinzwa, ukungqiniswanga
Yintoni i-lubricant kwaye yintoni na?
I-mousse ye-chocolate nge-raspberry
Ikhekhe "Ii-Chocolates ezintathu"
I-porcelain tableware. Ukhetho olufanelekileyo kunye nokunyamekela
Iimveliso zeCream: inzuzo kunye nemithetho yesicelo